Dhaqanka - Dongguan Walley Mashiinka Teknolojiyada Co., Ltd.
Aragtida shirkadeed (waxay ka tarjumaysaa booska iyo aaminaadda maamulka sare)
A. Noqo alaab-qeybiyaha ugu tartamida waxsoosaarka mashiinada saxda ah
B. Iyada oo leh qalab aad ufiican iyo tikniyoolajiyad heer sare ah si ay u noqdaan bixiyaha adeegga taageera ee ugu fiican warshadaha mashiinada saxda ah
C. Abuur shirkad tayo sare leh oo soo saare mishiin ah
Hadafka shirkadaha: (oo ay la socoto mas'uuliyadda bulshada qaarkood)
Qaadashada mashiinka saxda ah ee CNC sida xamuulka, waxay u abuureysaa qiimo macaamiisha waxayna ogaataa goosashada laba-laabka ee ruuxa shaqaalaha iyo ilbaxnimada.
Siyaasadda tayada:tayada jihaysan, heer sare; horumar joogto ah, qanacsanaanta macaamiisha
Siyaasadda deegaanka:keydso tamarta oo yaree qashinka; ilaalinta dhulka iyo ka hortagga wasakhda;
Waa inaan u hoggaansanaano sharciyada iyo qawaaniinta, u doodno cagaaran, tabinta tababaro isla markaana si joogto ah u horumarinno.
Qiyamka asaasiga ah: shaqo taxaddar leh, dakhli iyo kharash, maarayn daacadnimo, hanashada macaamiisha.
"Macaamiil" halkan macnaheedu waa wakiilka macaamiisha, shaqaalaha, alaab-qeybiyeyaasha, shirkadaha iyo bulshada!
Falsafada ganacsiga: halgan, hal-abuurnimo, saaxiibtinimo iyo u-hureysi, waxqabad iyo hufnaan.
Halgan:shaqada adag waa dabeecada qofkasta oo inaga mid ah inuu si adag u shaqeeyo. Markaan ka gaabsanno, waa nala baabi'in doonaa. Sidaa darteed, waxaan xoogga saareynaa in aan la jaanqaadno midba midka kale, dhiirrigelinno ka-dhaafidda waqtiga ku habboon, iska caabinno ka fikiridda wax horumar ah;
Horumarinta iyo Hal-abuurka:hal-abuurnimadu waxay ballaarin kartaa booska badbaadada ee shirkadda. Marka la eego u hoggaansanaanta qawaaniinta, dhammaan shaqaaluhu waxay ka qaybqaadan karaan dhinacyo badan sida hal-abuurnimada nidaamka iyo habeynta hal-abuurnimada iyada oo loo marayo waxqabadyo daraasad ballaaran, si loo rumeeyo dhammaan hal-abuurnimada shaqaalaha;
Walaalnimada iyo u-go'an:dadka u janjeedha waa falsafada ganacsiga aasaasiga ah ee Jixin. Waxaan u doodnaa dhaqanka qoyska oo waxaan u oggolaaneynaa xubnaha qoyska ee adduunka oo idil inay midoobaan oo is jeclaadaan, xoog ururiyaan, diyaar u noqdaan inay wax ku darsadaan, is caawiyaan, is jeclaadaan shaqada iyo jeclaadaan Wally, oo loo tixgeliyo shirkadda inay tahay guri;
Waxqabadka iyo hufnaanta:iyadoo maskaxda lagu hayo midnimo, wada shaqeyn daacad ah oo aan marnaba laga gaabin mas'uuliyadda, waxaan ku gaari karnaa himilada si hufan. Iyada oo loo marayo farsamo wax ku ool ah, waxaan si wax ku ool ah ula xiriiri karnaa, isugu duwi karnaa uguna xallin karnaa dhibaatada si dhammaystiran, laga bilaabo dhammaadka.